Calculator: Verenga Ongororo Yako Yashoma Sample Saizi | Martech Zone
Kugadzira ongororo uye kuona kuti iwe une mhinduro inoshanda yaunogona kumisikidza yako bhizinesi sarudzo pane zvinoda hunyanzvi hunyanzvi. Kutanga, iwe unofanirwa kuona kuti mibvunzo yako inobvunzwa nenzira isingafarire mhinduro. Chechipiri, iwe unofanirwa kuona kuti unoongorora vanhu vakaringana kuti vawane mhedzisiro inowoneka.
Haufanire kubvunza munhu wese, izvi zvingave zvinoda vashandi-zvakanyanya uye zvinodhura zvakanyanya. Makambani ekutsvagisa musika anoshanda kuti awane yakanyanya kuvimba, mwero wakaderera wekukanganisa pachinosvika hushoma huwandu hwevanogashira hunodiwa. Izvi zvinozivikanwa seyako saizi yekuenzanisira. Uri sampling imwe muzana yehuwandu hwevanhu kuti vawane mhedzisiro inopa danho re chivimbo kusimbisa mhedzisiro. Uchishandisa fomula inogamuchirwa zvakanyanya, unogona kuona ichokwadi saizi yekuenzanisira izvo zvinomiririra huwandu hwevanhu hwakazara.
Verenga Ongororo Yako Sample Saizi
Sampling Inoshanda Sei?
Iyo Fomula Yekusarudza Iyo Minimum Sample Saizi
Iyo fomula yekuona hushoma samuenzaniso saizi inodiwa kune yakapihwa huwandu ndeye inotevera:
S = Minimum sampuli saizi iwe yaunofanirwa kuongorora uchipa zvaunoshandisa.
N = Yese huwandu hwehuwandu. Uku ndiko kukura kwechikamu kana huwandu hwevanhu hwauri kuda kuongorora.
e = Margin yeKanganiso. Chero iwe paunoyedza huwandu hwevanhu, pachave nemuganhu wekukanganisa mumhedzisiro.
z = Unogona kuvimba zvakadii kuti huwandu hwevanhu hunogona kusarudza mhinduro mukati meimwe nhanho. Iyo yekuvimba muzana inoshandura kune z-mamaki, huwandu hwezvakasiyana kutsauka chikamu chakapihwa chiri kure nezvinoreva.
p = Kutsauka kwakazara (mune ino kesi 0.5%)
Tags: karukuretadanho rekuvimbakuongorora kwevatengionline Calculatorsaizi yekuenzanisirasampling saizitsvakurudzokuongorora kuvimbasaizi yekuyera saizikuongorora samplingongororo z-zvibodzwaz-mamakisi